ဘဝမှတ်တိုင်: မြန်မာဖောင်.နှင်. ကီးဘုတ်သွင်းလို.အဆင်မပြေဘူးလို. မေးလာတဲ. iPhone User တို.အတွက်
မြန်မာဖောင်.နှင်. ကီးဘုတ်သွင်းလို.အဆင်မပြေဘူးလို. မေးလာတဲ. iPhone User တို.အတွက်
ကျွန်တော် မနေက iPhone4ကို Jailbreak လုပ်နည်း ပြန်၇ှယ်ပေးလိုက်သော်လည်း....မြန်မာဖောင်.နှင်. ကီးဘုတ်သွင်းလို.အဆင်မပြေဘူးလို. မေးလာတဲ. iPhone User တို.အတွက် ပြန်၇ှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်.....ကျွန်တော်ပြန်ရှယ်ပေးထားတဲ. Jailbreak လုပ်နည်းက Tethered (ပါဝါ ပိတ်မိရင် PC ဖြင်.ပြန် Boot လုပ်ရ)ပါ။ Jailbreak လုပ်နည်းကို ဒီမှာ ဝင်ဖတ်ပေးပါ။Jabreak လုပ်ပြီးပါက မြန်မာဖောင်. နှင်. ကီးဘုတ် သွင်းနည်း ရန်အတွက် ကျွန်တော် Repo ကို Add ပေးပါ။
Cydia မှာ Repo (Sources) အသစ် Add လုပ်နည်း မသိပါက ဒီမှာဝင်ဖတ်ပေးပါ။
Add ပြီးပါက Zawgyi iOS7Font ကိုရှာပြီးဒေါင်းပေးပါ။
မြန်မာ ကီးဘုတ် အတွက် MMKeyboard For Ios 7+ ကို install ပါ။
install လုပ်ပြီးပါက Setting > General > Keyboard > Keyboards > Add New Keyboard ကိုဝင်ပြီး........Czech ကို ရွေးပေးပါ။
Credit..by ..ko MIN
ကျွန်တော် Repo လေးအား အသုံးပြု အားပေးတဲ့ အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်....ခင်ဗျ.....အားလုံးကို ဒီထက်မက ကူညီနိုင်အောင်.လေ.လာသင်ယူနေလျှက်ပါ..........ကျွန်တော် Facebook Page လေး ပြုလုပ်ထားပါတယ်.....ခင်ဗျ....Repo မှာနောက်ဆုံးတင်သော Tweaks / Updtae ပေးထားသော Tweaks တွေကို ကျွန်တော် ရဲ. မိတ်ဆွေတွေ အလွယ်တကူ သိစေရန် ရည်၇ွယ်ပါတယ်......ထိုကြောင် https://www.facebook.com/komin27 " Facebook Page " ကို Like & share လုပ်ပေးချင်းဖြင်. ကူညီပေးပါ ခင်ဗျ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/09/2014 04:02:00 am